Global Voices teny Malagasy · 17 Oktobra 2018
Tantara tamin'ny 17 Oktobra 2018
Mediam-bahoaka17 Oktobra 2018
Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fahavaratra ao Koety ary miady hevitra mikasika ireo toerana tsara handosirana ny hafanana ireo blaogera. Tsaratsara kokoa ve ny mitady paradisa voaaro mba hitoniana any an-trano na mandeha any am-pitandranomasina ary mety ho tratran'ny orana sy ny alahelo? Vakio ny famintinana ireo blaogy kowetiana nataon'i...
Eoropa Afovoany & Atsinanana17 Oktobra 2018
Tanora maro ao Honduras maro no mitoraka blaogy ankehitriny, ary mitobaka be ireo blaogy manokana amin'ny teny Espaniola. Fanambin'ireo ny fizarazarany ho anaty sokajy. Maro ireo fampidirana no miresaka mikasika ny zavatra rehetra na zavatra iray manokana, ny tapa-tsarimihetsika farany indrindra natao ho dokambarotran'ilay sarimihetsika, tantaram-pianakaviana, ary dokambarotra mafanafana mihitsy...
Raha tsy nandray anjara tamin'ny fandrobana sy ny kolikoly goavana ianao, dia miezaha mampiseho porofo amin'ny vokatr'izany. Raha tsy manana porofo ianao, dia lazao izany ary lazao fa tsy manan-tsiny ianao. Milaza ny lalàna fa tsy manan-tsiny ianao mandrapanaporofoana fa meloka.